नामिबियासँग जित्दा वा हार्दा नेपाललाई के हुन्छ? :: माधव धिताल :: Setopati
नामिबियासँग जित्दा वा हार्दा नेपाललाई के हुन्छ? नामिबियाविरुद्धका दुबै खेल नेपालका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपालले नामिबियासँग आफ्नै घरेलु मैदानमा दुईवटा खेल खेल्दैछ। नामिबियासँग खेल्न नेपाली टोलीको तयारी लगभग सकिसकेको छ। नेपाली टोलीलाई प्रक्षिक्षक जगत टमाटा र परामर्श प्रशिक्षकका रुपमा पुबुदु दायानायिकेले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। नेपाली खेलाडी अन्तिम अभ्यासमा व्यस्त छन्।
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपालले वैशाख ४ र ६ गते नामिबियाविरुद्ध खेल्न लागेको दोस्रो ‘होम म्याच’ हो। आइसिसीको नियमअनुसार विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा दुई वर्षमा १४ वटा म्याच खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले तीन राष्ट्रसँग घरेलु मैदानमा र तीनवटा खेल बाहिर खेल्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी एक खेललाई भने आइसिसीले ‘तटस्थ’ मैदानमा राखेको छ।
यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपाली क्रिकेट संघ क्यानको विवादका कारण आइसिसीले पपुवा न्यूगिनीसँग युएईमा खेलाएको थियो जुन खेल नेपालको घरेलु मैदानमा हुने पहिलो खेल थियो।
नेपालले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपका ७ राष्ट्रसँग होम र अवेका आधारमा खेल्नेछ। नेपालले अहिले स्कटल्यान्डसँग दुई खेल र पपुवा न्यूगिनीसँग दुईवटा गरी अहिलेसम्म ४ खेल खेलेको छ। ती चारवटै खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। आठ राष्ट्रमध्ये नेपाल अंक तालिकामा सबैभन्दा पुछारमा छ। नामिबिया नेपालभन्दा एक स्थान माथि छ र उसको अंक २ मात्रै छ।
के हो विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप?
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप डिभिजन २ भन्दा एक स्टेप माथिको प्रतियोगिता हो। डिभिजन २ का शीर्ष चार टोली र यसअघि विश्वकप क्रिकेट छनोटमा शीर्ष चारमा नअटेका चार टोलीले खेल्ने प्रतियोगिता हो।
यो प्रतियोगिता विश्वकप क्रिकेट छनोट खेल्नका लागि महत्वपूर्ण प्रतियोगिता पनि हो। विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा शीर्ष चारमा अट्ने टोलीले सन् २०१८ मा बंगलादेशमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।
त्यहाँ शीर्ष चारमा अट्न सके एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट खेल्ने अवसर पाउँछन्। माथिल्लो स्तरको एक दिवसीय क्रिकेट खेल्न पनि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो प्रतियोगितामा शीर्ष चारमा अट्ने टोलीले विश्वकप क्रिकेट छनोट खेल्ने अवसर पाउँछन्। जुन प्रतियोगिता एक दिवसीय क्रिकेट छनोटको पुछारमा परेका चार टोली र विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनमा शीर्ष चारमा अटेका टोलीबीच विश्वकप क्रिकेट छनोटका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
शीर्ष ४ मा अट्दा नेपाललाई फाइदा के?
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका ८ राष्ट्रमध्ये शीर्ष चारमा पर्ने टोलीले सन् २०१८ मा बंगलादेशमा हुने विश्वकप छनौटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। जसमा एक दिवसिय क्रिकेट मान्यताप्राप्त राष्ट्रमध्येका पुछारका चार टिमले पनि सहभागिता जनाउँछन्। उनीहरू पनि विश्वकप क्रिकेटको छनोटका लागि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट शीर्ष चारमा परेका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। विश्वकप छनौट खेलका लागि छानिन पनि नेपाल शीर्ष चारमा पर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल शीर्ष ४ मा अटाउन सकेन भने विश्व लिग डिभिजन २ खेल्नु पर्नेछ।
शीर्ष ४ मा नपर्दा के हुन्छ?
शनिबार र सोमबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नामिबियालाई हराउन सके शीर्ष चारमा पर्ने सम्भावना बढी रहन्छ। तर नामिबियासँग दुवै खेलमा वा एक खेलमा पराजित हुँदा पनि नेपाललाई ठूलो क्षति हुन्छ। किनभने नेपालले अझै नेदरल्यान्ड्स, हङकङ र केन्यासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
नेपाल नामिबियासँग पराजित भए पूर्ण रूपमा शीर्ष चारमा पर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसैले पनि दुवै खेल नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। दुवै खेलमा पराजित भए नेपाललाई डिभिजन २ खेल्नुपर्ने हुन्छ।
कुन–कुन टोलीसँग खेल्छ अवेमा नेपाल?
अवेमा म्याचमा पहिलो खेल नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेलेको थियो। ती दुबै खेलमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग पराजित भएको थियो। अब नेपालले अझै दुई राष्ट्रसँग अबेमा खेल्नुपर्नेछ, ती राष्ट्र हुन् नेदरल्याण्ड्स र हङकङ।
नामिबियापछि केन्यासँग खेल्नेछ घरेलु मैदानमा
नामिबियाविरुद्धको होम म्याचपछि आफ्नो अन्तिम घरेलु म्याच नेपालले केन्यासँग खेल्नेछ। यसअघि क्यान विवाद, वैशाख १२ मा आएको भूकम्पले त्रिवि मैदानमा भौतिक संरचनामा क्षतिलगायतका कारण नेपाललाई आइसिसीले घरेलु मैदानका रुपमा युएईमा लगेर पपुवा न्यूगिनीसँग खेलाएको थियो। पपुवा न्यूगिनीसँगका दुवै खेलमा नेपालले हारेको थियो। त्यसपछि नामिबियासँग नेपालले दोस्रो होम म्याच त्रिबि क्रिकेटमा खेल्न लागेको हो। नामिबियासँगका दुई खेलपछि नेपालले अन्तिम होम म्याच केन्यासँग खेल्नेछ।
तीन वर्षपछि त्रिबि मैदानमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट
सन् २०१३ को मार्चमा नेपालमा एसिसी ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेट भएयता नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता भएका छैनन्। कहिले क्यानभित्रको विवाद त कहिले त्रिवि क्रिकेट मैदानको अवस्था, भौतिक संरचना, तथा निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाईका कारण नेपालमा तीन वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएका छैनन्। त्यसैले पनि नेपालले तीन वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमन गरेको भन्दा पनि हुन्छ।
गत नोभेम्बरमा विश्वकप क्रिकेट च्याम्पियनसिपको पहिलो होम म्याच नेपालले आफ्नै घरेलु मैदानमा खेल्ने आइसिसीको तालिका थियो। तर क्यान विवाद, त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भइरहेको भौतिक संरचना मर्मत लगायत कारण देखाउँदै आइसिसीले नेपाल पपुवा न्यूगिनीसँगको होम म्याचलाई युएईमा लगेर खेलाएको थियो।
नामिबियाँसगको दोस्रो होम म्याच पनि आइसिसीले सर्शत गराउन लागेको हो। यसपटक आईसीसीले त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नती र सुरक्षा व्यवस्थाको निरीक्षण गर्न आइसिसीका एसिया डेभलपमेन्ट म्यानेजरसमेत रहेका श्रीलंकाका पूर्व कप्तान बन्दुला वार्नापुरालाई आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल पठाएको थियो।
आइसिसीको तालिकामा सन् २०१५ देखिको २०१७ यो दुई वर्षको अवधिमा नेपालले विश्व कप क्रिकेट च्याम्पियनसिप खेल्ने ८ राष्ट्रमध्येको एक टोली नेपालले खेल्ने ७ खेलमध्ये नेपालले तीन देशसँग ६ वटा खेल घरेलु मैदान र ३ देशसँगै ६ वटा म्याच अवेमा तथा एक म्याच आइसिसीको निर्णयमा खेल्नुपर्नेछ।
होम म्याच नेपालमै हुनुमा आइसिसीको हात
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्रको विवादकै कारण नेपालले दोस्रो म्याच पनि घरेलु मैदानमा खेल्न पाउने हो कि होइन भन्ने विषय अन्यौलमै थियो। क्यान विवादले उग्ररुप लिएपछि केही समय यता नेपालमा क्रिकेट प्रतियोगिता प्राय शून्य नै थिए।
क्यानको अधिवेशनलाई लिएर क्यान दुई समूहमा विभाजित भएपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने कुरा अन्यौलमै रुमलिएको थियो। गएको मंसिरमा एक पक्षले क्यानको अधिवेशन बोलाएर चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। तर आफ्नो स्वीकृतिबिनै चुनाव गराएको भन्दै राखेपले मान्यता नदिएर पुस १७ मा रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा अर्को क्यान गठन गरेपछि विवाद झन उत्कर्षमा पुग्यो। हाल पनि क्यानको दोहोरो उपस्थिति भएपछि विवाद कायमै छ। दुवै क्यानलाई आइसिसीले कुनै मान्यता दिएको छैन।
बरू आइसिसीकै पहलमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुन लागेकाले उसले दुवै क्यानलाई बाहिर राखेको छ। आईसीसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) सँगको सहकार्यमा स्वतन्त्रपूर्वक आयोजना गर्न लागेको हो यो प्रतियोगीता।
प्रकाशित मिति: 2016-04-13 12:41:25